Kashifaad: Lewandowski oo diyaar u ah inuu kooxdiisa Bayern Munich ku qasbo sidii ay ugu iibin laheyd kooxda. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kashifaad: Lewandowski oo diyaar u ah inuu kooxdiisa Bayern Munich ku qasbo sidii ay ugu iibin laheyd kooxda.
Kashifaad: Lewandowski oo diyaar u ah inuu kooxdiisa Bayern Munich ku qasbo sidii ay ugu iibin laheyd kooxda.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:36 PM Weeraryahanka xulka dalka Poland Robert Lewandowski ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda 11 ka jeer hanatay koobka horyaalada Yurub ee Real Madrid.
Weeraryanka kooxda Bayern Munich ayaa lasoo tabinayaa dhawaanahanba inuu ku wajahan yahay kooxda ka dhisan gegida Bernabeu, wallow uu sidoo kale arinkaas xaqiijiyey wakiilkiisa Cezary Kucharski.
Masuulka Bayern Munich Karl Heinz Rummenigge ayaase ka dhawaajiyey ineysan diyaar u aheyn Bayern iney xilligan fasaxaan xidigan weerarka kaga ciyaara kooxda ka dhisan gegida Alianz Arena.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska ugu carabka dheer dalka Spain ee AS uu maanta qoray in Robert uu diyaar u yahay inuu kooxda Bayern ku qasbayo sidii uu ugu biiri lahaa kooxda Real Madrid xagaagan.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in qandaraaska uu Lewandowski uu kula jiro kooxda Bayern uu dhacayo xagaaga 2019 ka, xilli uu shaqaba soo taabtay 42 jeer 51 kulan uu kasoo muuqday dhamaan tartamada xilli ciyaareedkii tagay.